Ike nke Ngwuputa Data na Mkpebi Nkwado | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 10, 2013 Monday, December 9, 2013 Douglas Karr
Ihe omuma ihe a sitere na New Jersey Institute of Technology gosiputara Data Mining na Mkpebi Nkwado Systems, na-akowa uzo anọ di iche n'ime usoro dum.
Njikwa data - nakọtara ozi nke ụlọ ọrụ nwere site na ahịa ha, ndekọ, na akụkọ ndị ahịa.
Njikwa Nlereanya - gbalịa imepụta nkwubi okwu sitere na usoro azụmaahịa dịịrị iji hụ ma ha agara nke ọma.
Injin Ihe Ọmụma - na-ele anya imepụta ọhụụ ọhụrụ iji mekọrịta ihe.
Ntuziaka Onye ọrụ - na-enye ohere maka mmekorita ya na data n'onwe ya.
Nke mbụ, njikwa data, na-anakọta ozi nke ụlọ ọrụ nwere site na ahịa ha, ndekọ, na akụkọ ndị ahịa. Njikwa ihe nlere na-anwa ime mkpebi site na usoro azụmaahịa dịịrị iji hụ ma ha aga nke ọma. Igwe ihe omuma na-ele anya imepụta usoro ọhụụ iji mekọrịta ihe. N'ikpeazụ, njirimara onye ọrụ na-enye ohere maka mmekọrịta na data n'onwe ya. Akụkụ ọ bụla nke usoro ahụ nwere ike ịkwanye akụkụ ọzọ.
Tags: data managementdata Ngwuputaihe omuma enginenchọpụta ahịanjikwa ihe nlereonye ọrụ interface
Ramon Andrews kwuru
Jenụwarị 13, 2014 na 8:15 PM
Ihe omuma ihe na-enye aka na ojiji nke ntinye data. Daalụ maka ịkekọrịta ozi dị mkpa dị otú ahụ.